N'ogbe GQ-KG (L) / 01/02 USB Grouting Agent factory na-emepụta | Gaoqiang
GQ-KG t nwere ihe na-agbasawanye micro, ihe nrụpụta mmiri dị elu, ọtụtụ ihe ndị na-emepụta ihe na ihe ndị dị na polymer tinyere PO, 42.5 ciment. Ọmarịcha oke mmiri, nkwụsi ike kwụsiri ike, ogo dị mma, enweghị shrinkage, mmụba ntakịrị, enweghị ihe na-emerụ ahụ na mkwado. Ọ bụ gro
GQ-KG t nwere ihe na-agbasawanye micro, ihe nrụpụta mmiri dị elu, ọtụtụ ihe ndị na-emepụta ihe na ihe ndị dị na polymer tinyere PO, 42.5 ciment. Ọmarịcha oke mmiri, nkwụsi ike kwụsiri ike, ogo dị mma, enweghị shrinkage, mmụba ntakịrị, enweghị ihe na-emerụ ahụ na mkwado. Ọ bụ ihe na-achọta ihe maka ọwa - nke nwere ike ime ka nsogbu nwee ike iru, nkwonkwo na nkwonkwo nke ndị otu. Ọdịmma ngwaahịa ahụ na-ezute ihe achọrọ TB / T3192-2008, JTG / TF 50-2011 na ụkpụrụ ndị ọzọ
1.With ezigbo fluidity na obere oge ọnwụ, mfe pịa pulp ọrụ
2.The nkwalite mmetụta bụ doro anya. Ihe mado nwere nnukwu ike (> 50MPa) na ezigbo adhesion mgbe emechara
3.No shrinkage ma ọ bụ mmeba mgbe odide, ezigbo olu kwụsie ike
4.The slurry anaghị agba obara, nwere ike ịnọgide na-arụ ọrụ ogologo oge, slurry ndochi ogo dị mma
1.All Railway na okporo ụzọ post - Stressing Bridge Ọwara grouting
2.Ndụ ala nke nnukwu ụlọ
3.Hell grouting nke ụlọ ọrụ nuklia
4.Stop leakage grouting na nkwonkwo nke dị iche iche ihe owuwu
1.Control mmiri-ciment ruru KG (L) 01≤0.33, KG (L) 02≤0,28 kpebisiri ike site na ule tupu ojiji
2.Dị ka usoro ngwakọta akọwapụtara maka ịgwakọta, ịgwakọta oge abụghị ihe na-erughị 4 ~ 5 nkeji, ọ ga-abụrịrị ihe achọrọ nke na-akpali akpali, na-agbakwunye mmiri iji ụzọ abụọ
3.The grouting mgbapụta kwesịrị kpochara tupu tupu grouting. A ga-agbakwunye slurry ahụ ka ọ nọgide na-enwe ịdị n'otu na fluidity nke slurry ahụ. A ga-ejupụta slurry ahụ n'ime nkeji iri atọ
4.Piston mgbali mgbapụta ga-eji maka grouting, na grouting mgbali ekwesịghị ịbụ ihe karịrị 0.6mpa
5.Di iche ụdị ciment si dị iche iche na-emepụta ebe nwere oké mmetụta na ngwa mmetụta nke grouting gị n'ụlọnga. Ọ na-atụ aro na ndị kasị mma inggwakọta ego nke ciment iche na grouting gị n'ụlọnga kwesịrị kpebisie ike site ule tupu ojiji. Gbalịa ịhọrọ ụdị ciment ndị nwere ezi ngbanwe, ịda mbà na ike dị elu
Ngwugwu & Nchekwa
Ngwaahịa a bụ ntụ ntụ, juru n'ọnụ na plastic kpara akpa lined na plastic ịse, 40kg / akpa ma ọ bụ 50kg / akpa
Na-eguzogide mmiri ozuzo, mmiri na mmebi, dị irè maka ọkara otu afọ. A ga-edebe ngwaahịa na-anaghị ere ọkụ na ihe mgbawa
Nke gara aga: GQ-208 Ngwunye Antifirizi